बच्चा फालेको आरोप लागेकी आमा पहिलोपटक मिडियामा, किन त्यस्तो गरियो ? (भिडियो) -
बच्चा फालेको आरोप लागेकी आमा पहिलोपटक मिडियामा, किन त्यस्तो गरियो ? (भिडियो)
काठमाडौं । केहि दिन अगाडि विस्कुटको कार्टुनमा फेला परेकी बालिकाको बारेमा खेलिएको घृणित खेलमा आफुलाई पनि सहभागी बनाएको थाहा पाएपछि युट्युवर भाग्य न्यौपाने फेरी त्यहाँ गएका छन्। कपनमा एउटा बेवारिसे बालिका फेला परेको भन्दै सबैभन्द पहिला युट्युवर भाग्य न्यौपानेलाई बोलाईएको थियो। उनले बच्चा फेला परेको भन्दै युट्युवमा भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए भने तत्काल नै बच्चाको स्यहारसुसारका लागि भन्दै दश हजार सहयोग गरेका थिए।
बालिकाको आइतवार न्वारन समेत गरिएको छ। तर त्यो घटनाको भित्रि पाटो सार्वजनिक भएपछि युट्युवर न्यौपाने पुगेका थिए। शिशु वेवारिसे फेला परेको भन्दै बालगृहकी संस्थापक पुष्पा अधिकारीले संरक्षणको जिम्मा लिएकी थिइन्। उनको बालगृहमा पुगेका दर्जनौ युट्युवरले भिडियो बनाएका थिए। त्यस पछि देशविदेशवाट सहयोगको ओइरो आउन थाल्यो।
शिशु भेटिएको सातौं दिनमा अन्तत नयाँ रहस्य खुलेको छ। शिशुलाई पैसा कमाउनका लागि त्यसरी जानाजान राखिएको रहस्य खुलेको छ। त्यो बच्चालाई जन्मदिने आमासंगको मिलेमतोमा यस्तो गरिएको रहस्य खुलेको हो। उनी केही समय अघि वैदेशिक रोजगारीमा रहेर अलपत्र परेकाहरुलाई चार्टर विमानवाट उद्दार गरिएकी महिला हुन्। उनी गर्भवती अवस्थामा नेपाल आएकी थिइन्। उनले बच्चालाई जन्म दिइन्। तयसपछि यसरी खेल सुरु गरिएको छ।
काठमाडौंको कुनै संस्थामा बसेकी ति महिलाको परिचय अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ। परिवारलाई खवर नगरी काठमाडौंमै कुनै संस्थामा आश्रय लिई बसेकै समयमा शिशु जन्मेपछि सहयोगीमार्फत् उनको केयर बालगृहका संस्थापकसँग भेट हुन्छ । र उनैको मिलमतोमा साउन १२ गते नाटक मञ्चन गरी ति शिशुलाई कार्टुनमा राखेको खुलासा भएको छ । घटना उजागर भएलगत्तै केयर बालगृहका संस्थापक पुष्पा अधिकारी, ती शिशुकी आमा र सहयोगीलाई प्रहरीेले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको छ।
घटनाले अहिले चौतर्फी चर्चामा लिएको छ। बालगृहका संस्थापक पुष्पा अधिकारीलाइ गरेको सहयोग पनि फिर्ता मागिएको छ भने अहिले ति शिशुकी आमा पनि मिडियामा आएकी छन्। आखिर के कति कारणले उनले यसरि बच्चालाइ काटुनमा राख्न पर्यो त रु त्यसको बारेमा उनले सबै खुलाएकी छन् जुन भिडियो तल हेर्नुहोस।